यी ४ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ , कुन कुन राशी हुन् ? – Namaste Dainik
यी ४ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ , कुन कुन राशी हुन् ?
April 9, 2020 NamastedainikLeaveaComment on यी ४ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तो सुकै दुखमा पनि दिन्छन् साथ , कुन कुन राशी हुन् ?
यो राशी भएका महिलाहरुमा श्रीमानलाई सजिलै काबुमा राख्ने क्षमता हुन्छ । यी राशी भएका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन । आफ्नो पतिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि साम, दाम,दण्ड, भेदको समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कर्मघरलाई स्वर्ग बनाउन हर सम्भव प्रयत्न गरिरहन्छन्।
यो राशी भएका महिलाहरु अफ्ठ्यारो परिस्थतिमा रुष्ट रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने क्षमताका हुन्छन् । यस राशिका महिलाहरु आफ्नो पतिलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्छन् । पतिको कुरा सुन्दै परिवारमा राज गर्ने यस राशिका महिलाहरु आफ्नो कुरा राख्न अलिकति पनि डराउदैनन् । परिवारको हरेक कार्यमा आफै हावी हुने आदत यिनीहरुमा हुन्छ ।
यो राशी भएका महिलाहरु जिद्दी हुन्छन् । साथै अरुलाई सहजै मनाउन सक्ने खुबी यिनीहरुमा हुन्छ । घर परिवारमा हुने हरेक कार्यको निर्णयमा आफ्नै प्रभाव जमाउने खालका हुन्छन् । श्रीमानलाई मनाउन यिनलाई कुनै कठिनाई हुँदैन । कर्कट राशि भएका बुहारीले घरमा राजनै गर्छन् ।
यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन । कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन् । यस राशिका महिलाहरुसँग हरेक परिस्थितिमा आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने खुबी हुन्छ ।
भारतमा लक्डााउन मा फसेका नेपाली भन्छन,रोग ले भन्दा पहिला भोक ले मरिन्छ होला।
गगन थापा भन्छन्: चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्ने होइन, बरु हाम्रो तलब काट्नुस्।
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ शंखको दर्शन गरि यसको महिमा पढेर शेयर गर्नुहोस
यी हुन् धनलाभ हुने २१ वटा संकेतहरु:ॐ लेखी हेरी एक सेयर गरौं…
May 7, 2020 Namastedainik
आज शनिबार,शनीदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्,सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् !